गर्मीमा अवश्य खानुहोस् यी १० फाइदाजनक खानेकुरा | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
गर्मीबाट छुटाकारा पाउनका लागि हामीमध्ये धेरैले कोल्ड ड्रिंक्स अथवा आइसक्रिम खाने गर्दछौँ । यसले तपाईंको शरिरमा नकारात्मक असर पुर्याउने पनि सायद हामीमध्ये धेरैलाई थाहा होला ।
गर्मीमा सबैले आफ्नो आहारामा निकै धेरै पानीको साथै साग समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । गर्मीमा सबै रोगहरुले शरिरलाई घेर्ने हुँदा खानामा सागसब्जी संलग्न गर्दा निकै धेरै पोषण पाइने गर्दछ ।
आज हामी तपाईंलाई यस्ता खानेकुराको बारेमा जानकारी दिँदै छौँ जुन तपाईंले गर्मीमा खान अत्यावश्यक छ । यी खानेकुराहरु खाँदा तपाईंको पेट पनि ठिक हुनुका साथै शरिर निकै ताजा हुने गर्दछ ।
गर्मीमा फर्सीको सेवन गर्दा पेट सफा हुने गर्दछ । यसले पेटको किरालाई पनि सखाप पार्ने गर्दछ । यसमा पोटासियम र फाइबरको मात्रा निकै धेरै हुने गर्दछ । यसले रक्तचापलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने गर्दछ । यसले छालाको थुप्रै रोगलाई पनि ठिक पार्ने गर्दछ । यसले मधुमेहका रोगीलाई पनि फाइदा पुर्याउने गर्दछ ।
करेलाले छालासम्बन्धि रोग लाग्नबाट बचाउँछ । यसले छालामा फंगल इन्फेक्सन र दागको उत्पत्ति हुनबाट बचाउँछ । यसले उच्च रक्तचाप र मधुमेहलाई ठिक ठाउँमा राख्ने गर्दछ ।
लौकामा निकै धेरै पानी हुने भएका कारण गर्मीमा यसको सेवनले शरिरलाई निकै फाइदा पुर्याउने गर्दछ । यसका साथै यसले पेटको रोग जस्तै एसिडिटी र अपचलाई टाढा राख्ने गर्दछ । लौकामा पाइने सोडियमले पनि शरिरलाई निकै फाइदा पुर्याउँछ ।
४. चाइनिज स्पिनिचः
चाइनिज स्पिनिच एकप्रकारको साग हो जसमा प्रचुर मात्रामा भिटामिन ए, बी सिक्स र भिटामिन सी पाइने गर्दछ । यसमा गर्मी भगाउने तत्व पनि पाइने गर्दछ । यसले गर्मीमा लाग्ने मलेरिया रोगलाई पनि टाढा राख्दछ ।
५. पाटे घिरौँलाः
यो तरकारीले रगतलाई सफा गर्ने, ब्लड सुगरलाई नियन्त्रित गर्ने गर्दछ र पेटको लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ ।
काँक्रोमा ९६ प्रतिशत पानी पाइने गर्दछ जसले शरिरको तापमानलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रित गर्ने गर्दछ । काँक्रोमा निकै धेरै पोटासियम, म्याग्निसियम र फाइबर पाइने गर्दछ जसले ब्लड प्रेसरलाई सधैँ नियन्त्रणमा राख्दछ ।
पालुङ्गोमा क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, भिटामिन ए, बी, सी आदि प्रचुर मात्रामा पाइने गर्दछ । यसका साथै यो रेशायुक्त हुने गर्दछ । यसकारण यसलाई जीवन रक्षक भोजनको रुपमा लिइन्छ ।
८. भेँडे खुर्सानीः
यसमा भिटामिन सि, भिटामिन ए र बीटा क्यारोटिन भारी मात्रामा पाइन्छ । यसमा क्यालोरीको मात्रा नहुने भएका कारण यसले खराब कालेस्ट्रोललाई बढाउँदैन । यसले शरिरलाई हृदयाघात, दम, मोतिबिन्दुबाट लड्न पनि सहयोग गर्दछ ।
९. हरियो सिमीः
हरियो सिमीमा ओमेगा–३ फ्याटी एसिड हुने गर्दछ । यसका साथै यसमा निकै धेरै फाइबर हुने गर्दछ जसमा हृदय रोग हुनबाट बचाउँछ भने गर्मीमा पनि शरिरलाई राहत प्रदान गर्दछ ।
गर्मीमा हाइड्रेट रहँदा तपाईंको दिमाग तिखो र मुड स्टेबल हुने गर्दछ । यसले तपाईंको शरिरलाई ताजासमेत राख्दछ । सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको खरबुजा खाँदा तपाईंले पानी पिइराख्नुपर्दैन । एक नयाँ अनुसन्धानका अनुसार पानीको मात्रा धेरै भएको खानेकुरा खाँदा थोरै क्यालोरी भएको खानाले नै तपाईंलाई सन्तुष्ट पार्ने बताएको छ ।
बैशाख २४ गते, २०७२ - ०१:०४ मा प्रकाशित